> Resource > Samsung > Sida loo Play regelingen Faylal ay ku Samsung Galaxy S5, S4, S3, S2, S
Taasi waa dhibaato dhab ahaantii wax aad looga xumaado marka aad isku dayay badan si ay u gudbiyaan files regelingen aad mid ka mid ah Samsung Galaxy Taxanaha ah (Galaxy S5, S4, S3, iwm) ee loo maqli karo, aad ayaa u sheegay qalabka uusan ciyaari karo qaab regelingen files. True, Samsung Galaxy Taxanaha ma taageeri inuu u ciyaaro qaab music noocan oo kale ah oo caan ah. Waxaad u baahan tahay diinta ka fudud ah si loogu badalo regelingen in Samsung Galaxy Taxanaha qaabab ay taageerto, si aad u ciyaari karaa regelingen on qalabka Samsung Galaxy si xor ah.
Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) wuxuu taageeraa oo dhan ee Samsung Galaxy Taxanaha, Galaxy S5, Galaxy S4, Galaxy S3, Galaxy S2 iyo Galaxy S. Oo aad bixisaa qaab gaar ah filaayo in model kasta. Just si fudud doorashada qaab loogu qalab aad, aad u bedeli karaan regelingen ku haboon qalabka ugu fiican ee app this. Geedi socodka waa mid aad u fudud, kaliya qasabno yar. Oo waxay qaab beddelidda waa si dhakhso ah, oo kaliya dhowr daqiiqo. Taasi waa sida.
1 Import files regelingen in regelingen si Converter Galaxy
Ka dib kuu soo ordi barnaamijkan, halkan soo galana menu ay, ka dibna dooran dar doorasho Faylal ay jiraan xitaa your computer iyo dooran files regelingen aad rabto in aad keeno. Haddii kale, waxaad dooran kartaa in dajiyaan files diirada kuwaas oo ay soo jiitaa-iyo-dhibic.
MP3 waxaa si balaadhan oo ay taageerayaan ku dhowaad wax qalab. Sidaas halkan, waxaad dooran kartaa MP3 format sida wax soo saarka. Haddii kale, waxaad dooran kartaa qaab si toos ah lagana filaayo in aad qalab ee ay liiska qaabka wax soo saarka.
Si aad u furato saarka liiska qaab this app ee, kaliya aad u tagtaan inaad Murayaad Qaabka Output inay halkaas guji image qaabka. In liiska saarka qaabka, u tag "qaab"> "Audio"> "MP3" ama uu dedeg "Device"> "Samsung" iyo doorato qalabka aad rabto.
3 Beddelaan regelingen in Samsung Galaxy S5 / S4 / S3
In tallaabadii u dambaysay, aad guurto mouse iyo ilaa dhankiisii ​​gacantiisa midig hoose ee suuqa si guji waxaa Beddelaan button. Hadda, waxa aad ka arki kartaa regelingen si Converter Galaxy bilaabayo diinta video ah. Riix ikhtiyaarka Folder Open hoose ee suuqa kala ka dib markii diinta, waxaad ka heli kartaa faylasha wax soo saarka. Marka aad u samayn, kaliya furaysto qalab aad galay computer ka, ka dibna tranfer files wax soo saarka si ay qalabka u via cable.